लगानीयोग्य पूँजीमा सहज : वाणिज्य बैंकमा ५८ करोड रूपैयाँ निक्षेप भित्रिदैं | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर लगानीयोग्य पूँजीमा सहज : वाणिज्य बैंकमा ५८ करोड रूपैयाँ निक्षेप भित्रिदैं
on: ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १८:२४ मुख्य खबर, समाचार
जेठ ३, काठमाडौं (अस) । लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) को समस्या भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरूमा ५८ करोड रूपैयाँ निक्षेप भित्रिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागले वाणिज्य बैंकहरूको १ वर्षे मुद्धती निक्षेपमा रू. ४७ करोड र कल (चाहेको वखत तुरुन्तै पाईने) निक्षेपमा रू. ११ करोड रुपैयाँ राख्ने भएकाले उक्र रकम भित्रिने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको विभिन्न कोषमा रहेका निस्क्रीय मौज्दात बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउदा अब वाणिज्य बैंकलाई केही राहात पुग्ने छ । यद्यपी बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा निस्क्रीय रुपमा रहेको सरकारको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए ।